I-Angstrom Inkcazo (i-Physics neKhemistry)
Indlela i-Angstrom eya kuba yiyunithi
I- angstrom okanye i- ångström iyunithi yobude esetyenziswe ukulinganisa imida emancinci. I-angstrom enye ilingana ne-10 -10 m (enye ibhiliyoni yeshumi yeemitha okanye i-0.1 nanometers ). Nangona inyunithi ibonwa kwihlabathi lonke, akusiyo inkqubo yeSizwe (i- SI ) okanye i-unit unit.
Isimboli se-angstrom ngu-Å, enobumba kwi-alfabethi yesiSweden.
1 Å = 10 -10 iimitha.
Ubuninzi be-atom lukwimeko ye-1 angstrom, ngoko i-unit iyakunceda ngokubhekiselele kwibala le- athomu kunye ne-ionic okanye ubungakanani bee-molecule kunye nokuhamba phakathi kweenqwelo zee-athomu kwiikristali .
I-radius yama-atom ye-chlorine, isulfure, kunye ne-phosphorus yinto ephakathi kwe-angstrom enye, ngelixa ubukhulu be-athomu ye-hydrogen malunga nesigamu se-angstrom. I-angstrom isetyenziswe kwi-physics eqinile ye-physics, i-chemistry kunye ne-crystallography. Iiyunithi zisetyenziselwa ukukhankanya ubude bendawo yokukhanya, ubude beekhimikhali kunye nobukhulu bezakhiwo ezincinci usebenzisa i-microscope ye-electron. Iivelengths ze-X-ray zinganikezwa ngama-angstroms, njengoko ezi zixabiso zithela u-1-10 Å.
Iyunithi ibizwa ngokuba yi-physics yaseSweden no-Anders Jonas Ångström, eyayisebenzisa ukuvelisa ishati yamanqanaba emitha ye-electromagnetic emisebe yelanga ngo-1868. Ukusetyenziswa kwakhe kweeyunithi kwenza ukuba kubekho ukunika iingxelo zokukhanya kwelanga (4000 ukuya ku-7000 Å) ngaphandle kufuneka usebenzise ama-decimals okanye amaqhezu. Ishati kunye neyunithi zazisetyenziswa kakhulu kwi-physics ye-solar, i- spectroscopy ye- athomu kunye nezinye i-science ezijongene nezakhiwo ezincinci kakhulu .
Nangona i-angstrom i-10 -10 yamitha, yachazwa ngokucacileyo ngumgangatho wayo kuba incinci. Iphutha kumgangatho weemitha lalikhulu kuneyunithi ye-anstrom! Ingcaciso ye-1907 ye-angstrom yayiyi-length of length yomgca obomvu we-cadmium ebekwe kwi-6438.46963 yamazwe angaphandle ångströms.
Ngo-1960, umgangatho weemitha wawuhlaziywa ngokwemibono ye-spectroscopy, ekugqibeleni isekelwe iiyunithi ezimbini kwintetho efanayo.
Ezinye iiyunithi ezisekelwe kwi-angstrom yi-micron (10 4 Å) kunye ne-millimicron (10 Å). Ezi nqununu zisetyenziselwa ukulinganisa ubunqamle befayili kunye ne diameter yamatye.
Ukubhala i-Angstrom Symbol
Nangona isimboli se-angstrom kulula ukuyibhala ephepheni, kukho ikhowudi efunekayo ukuyivelisa ngokusebenzisa imidiya yedijithali. Kwimaphepha amadala, isicatshulwa esithi "AU" ngamanye amaxesha sasetyenziswa. Izindlela zokubhala isimboli ziquka:
Ukuthayipha uphawu U + 212B okanye u-U + 00C5 kwi-Unicode
Ukusebenzisa isimboli & # 8491 okanye & # 197 kwi-HTML
Ukusebenzisa ikhowudi & Ukuhlawula; kwi HTML
Iproton Inkcazo - iComistry Glossary
I-Aliphatic Amino Acid Inkcazo
I-Carbon Dioxide - Indlela Yokulungisa I-Carbon Dioxide Gas
CSUB GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Yisiphi iMisa yeTridentine?
Yintoni Inokuthi I-Dinosaurs Ingasichazela Ngokufudumala Kwehlabathi?